WAREYSI: Professor Axmed Ismaaciil Samatar | Wargeyska Xog-Ogaal
“Itoobiya naguma soo duusheen haddaanu leennahay madax iyo dowlad dhab ah”
Xusuuqda Sawirka: Somalitalk.com
Professor Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu ka mid yahay aqoonyahannada waaweyn ee Soomaalida kuwooda safka hore, hadduusanba ahayn kan koowaad. Waa indheergarad maskax-maal ah oo si joogto ah isha ugu haya waxa ka socda Soomaaliya iyo adduunkaba. Wuxuu aad u taxliiliyaa is-beddelka xaaladaha caalamka. Wuxuu wax ku bartay dalka Mareykanka muddo hore. Wuxuu haddeer hormuud (Dean) ka yahay Institute for Global Citizenship, Macalester College. Sidoo kale, waa James Wallace Professor ee dhinaca culuunta caalamiga (International Studies). Wuxuu shahaaddada B.A. ka qaatay University of Wisconsin (La Crosse) sannadkii 1978-kii. Saddex sano kaddib 1981-kii, wuxuu shahaaddada M.A. ka qaatay University of Denver. Isla mar ahaantaas, wuxuu shahaaddada Ph.D. ku diyaariyey isla jaamicaddaas sannadkii 1984-kii. Prof Samatar, wuxuu muxaadarooyin ka soo jeediyey jaamicado iyo kulliyado dhowr ah oo ay ka mid yihiin; University of Amsterdam, Cornell, Harvard, Iowa, London School of Economics and Political Science, Oslo University, University of Pennsylvania, Jaamicaddii Ummadda Soomaaliya, Toronto University, York University, School of Oriental and African Studies (SOAS) ee Jaamicadda London iyo Wellesley College. Wuxuu wax ka qoray, kana tifatiray dhowr buug – waxaa buugaagtiisaas ka mid ah; The Somali Challenge: From Catastrophe to Renewal, Socialist Somalia; Rhetoric and Reality, The State in Africa: Reconsiderations, Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction iyo Literature, the Creative Imagination and Globalization. Wuxuu qoray in ka badan soddon maqaal-cilmiyeed. Wuxuu tifatire ka yahay journal-ka Bildhaan oo ah kii ugu horreeyey ee caalami ah ee falanqeeya culuunta Soomaalida. Wuxuu kaloo tifatire ka yahay 22 qaybood oo ka mid ah Macalester International oo ah warside waxbarashada iyo caalamiyeynta. Prof Samatar oo ah Fulbright Fellow, cilmi-baarista uu hadda ku dhex jiro waa hoggaaminta iyo khibradda Soomaalida. Waxaa ii suura-gashay inaan dhawaan xafiiskiisa oo ku yaalla magaalada St Paul ee gobolka Minnesota kula kulmo, kulana sheekeysto. Waxaa na dhex maray is-wareysigan:
Su’aal: Dr Samatar, marka hore waxaan jecelahay inaad guud-martid taariikh nololeedkaaga – halkii aad ku dhalatay, ku soo barbaartay iyo sidii aad ku timid waddankan Mareykanka?
Jawaab: Anigu waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Gebiley oo ku taalla woqooyiga Jamhuuriyadda Soomaalida, taas oo magaalada Hargeysa galbeed ka xigta illaa 40ml. Waa dad badankood ay beeraleey yihiin oo deegaan ah, inkasta oo xoolo dhaqato-na ay ku dhow dahay. Waa meel roobka ku wanaagsan oo aad u qurux badan. Dadku iminka wuu ku soo batay. Halkaas ayaan school-ka hoose iyo malcaamadda Qur’aanka labadaba ka galay. Aabbaheey wuxuu ahaa qofkii madaxda u ahaa dhismaha school-kii ugu horreeyey ee magaalada laga dhiso ee xadaaradda cusub ah oo xisaab, af-Ingiriisi iyo af-Carabi lagu dhigo. Dabadeed waxaan u gudbay Camuud oo magaalada Boorame ka hooseysa 5ml oo iyaduna aad u qurux badan oo meel beero iyo webiyo leh oo buuraha hoostooda ku taalla. Camuud waxaan ka galay school-ka dhexe ee intermediate-ka. Afar sannadood ayaan ku jiray – waa school la seexdo oo wax laga cuno oo boarding ah. Kaas markuu ii dhammaaday waxaa Camuud laga dhisay school sare oo thanawi ah, halkaas ayaan dabeetana u wareegay oo aan ku jiray afar sano dugsiga sare. Markaan dhammeeyey dugsiga sare ee Camuud waxaa na laga qaaday imtixaan markaa lagu soo sixi jiray England. Markii imtixaanku noo dhammaaday waxaan imid magaalada Hargeysa. Waxaa na lagu soo rogay ciyaarsiis, in qof walba uu galo tababar xagga militariga ah oo ahaa national service, ka hor inta aan la gelin scholarship iyo waxyaabahaa. Tii baan ku jiray muddo saddex bilood ah. Dabadeed Xamar baan tagay oo qof walba isku shubayey. Waxyaabaha kadeedka inoo keenay waxaa ka mid ah in wax walba meesha xarunta ah laga sameeyo, taasoo ah waxyaabaha xagga horumarka wadammada Africa ee soo koraya dhibaatada u keenaya in magaalo qura uu faynuusku ka daarnaado oo wax walba laga sameeyo. Xamar baan nimid, gaar ahaan intii ka soo baxday dugsiyadii sare – dhinaca woqooyiga laba dugsi sare baa ku tiillay (Camuud iyo Sheekh) iyo mid Xamar ku yiillay. Imtixaan baa na laga qaaday xagga idaacadda. Waxaa la doonayey saddex qof in la qaato. Imtixaankii baan galay, oo lagaa qaadayo beddelaadda Soomaali iyo Ingiriisi, iyo Ingiriisi iyo Soomaali, codkaaga la eegayo, qorniinkaagana la eegayo. Toddobaad in ku dhow buu imtixaankaasi socday. Markaa anigu waxaan noqday kii koowaad, waxaana galay Radio Mogadishu. Waxaan ka shaqeeyey waxaan sannad ahayn, dabadeedna BBC-da ayaa doonaysay dad kale oo Soomaali ah oo dhallinyaro ah inay qaadato. Markaa imtixaankii baan galay oo aan isna kii koowaad noqday, halkaas ayaana laygu tababaray oo aan BBC-da ka shaqeeyey afar sannadood in ku dhow. Markaan muddo England joogay oo aan Jaamacadda London-na fasallo ka qaatay, waan ka daalay howshii, waxayna ila noqotay inaan u baahanahay inaan tacliinteyda sii kordhiyo. Waxaan imid waddanka Mareykanka oo markaa ahaa waddan cajiib ah oo dhallinyarada adduunkoo dhami ay eegayeen. 1974-kii ayaan imid waddanka Mareykanka oo aan waxbarashada sare ka billaabay.
S: Sidaad ka war-qabto, waxaa jira cabsi ku saabsan in Soomaaliya uu ka socdo gumaad iyo barakicin ay dadka rayidka ah u geysanayaan ciidammada Itoobiya ee ku duulay dalkii. Maxay dagaallada socda kuula muuqdaan? Shaqsiyan, ma kula tahay in xasuuq (genocide) ama isir-sifeyn (ethnic cleansing) lagu sheegi karo madaafiicda ay ciidanka Itoobiya maalin kasta ku ridayaan goobaha rayidka?
J: Waa su’aal ballaaran. Anigu in badan baan ka hadlay, wax badanna waan ka qoray. Horta dadka Soomaalidu iyagaa is gabay oo halkaan is dhigay. Itoobiya kuma aysan soo duusheen haddii aanay jirin dowlad iyo madax dhab ah. Maanta waxay ugu soo dhacday inay soo duusho waxaan jirin cid albaabka ilaalinaysa. Aniga waxay ila tahay saddex arrimood ayaa u sabab ah soo gelidda Itoobiya ee waddanka ay qabsatay;
Itoobiya oo weligeedba doonaysay inay Soomaaliya ka dhigato meel ay xukunto ama dad u xukuma ay u joogaan, waayo dhul bey naga haysataa iyo iyadoo badda hunguri ka hayo oo doonaysa meel ay saani xoolaheeda uga soo dejisato.
Dowladda ku meel gaarka dadka hoggaamiya oo iyaguna saaxiib la ah Itoobiya, muddo dheerna halkaa joogay oo heshiis ku yeeshay inay madaxtinimada ay heleen ay Itoobiya u adkeyso. Shirkii Nairobi ka dhacay, dowladda Itoobiya gacanta aad bey ugula jirtay, waxayna ku guuleysatay in dadkii ay doonaysay ay shirkaa ku soo baxaan.
Dadkii Soomaaliyeed ee waddanka deggenaa oo qaasatan ay ugu horreeyaan nimankii wadaaddada ee Maxkamadaha Islaamiga oo intii gaabnayd ee ay waddanka hayeen shaqa wanaagsan ka qabtay, haddana qashiinnimo, badownimo, degdeg iyo hanjabaad aan loo baahnayn ay ka timid. Meel la doonayey in dab laga shido ayay batrool ku shubeen, Itoobiyana marmarsiinyo ayay ka dhigatay. Qasaaraha ay keentay Itoobiya waa mid aan weli sheekadiisa la gelin. Dad badan oo Soomaali ah ayaa lagu baa bi’iyey. Aniga tirada i soo gaartay waa 6,000 inay ku dhinteen, 20,000 in ku dhowna ay ku dhaawacmeen, malyuun in ku dhowna inay xoolahoodii ku baa be’een oo ay cidla iyo cadceed iyo haraad ay is haystaan. Markaa dowladda Itoobiya mas’uuliyad weyn ayay ku leedahay, xisaabteedana markaan madax dhab ah yeelanno oo aanu dad noqonno ayaa la geli doonaa.
S: Waxaa taariikhyahannada iyo culumada cilmiga Anthropology ee ay ka midka yihiin; Dr Saadia Touval, Dr Maxamed Cabdi (Gaandi) iyo Dr Ioan M. Lewis ay isku wada raacsan yihiin in markii ugu horreysay ee la maqlo magaca ‘Soomaali’ laga dhex maqlay gabay-digasho ah oo uu tiriyey nin boqor ka ahaa Itoobiya qarnigii 14-aad, kaddib markii uu dagaal kaga guuleystay dad Soomaali ahaa. Markaa ka hor, magacyadii Soomaalida loogu yeeri jiray waxay ahaayeen Zinji iyo Berber, sida ku cad qoraalladii ay ka tageen sahmiyeyaashii Carbeed, Ibni Batuuta iyo Ibni Saciid. Haddaba, sidee lagu soo afjari karaa colaadda hakan weyday ee Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeysa toddobada qarni? Ma kula tahay aragti dhaxalgal ah in Soomaaliya ay la saxiixato Itoobiya heshiis 100 sano oo colaad joojin ah?
J: Colaadda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeysa waa laga heshiin karaa, boqol sannadoodna uma baahna. Waqti gaaban oo aad u gaaban ayaa lagu dhammeyn karaa, laakiin xagga Soomaalida markaad ka eegtid waa in la helaa ummad dhisan oo madax karti leh oo dooddeeda meel marisa, oo ilaalisa Soomaalinnimada waxay tahay. Inta aynaan taa helin ma dhaqaaqi karno. 1960-1990, dowladda Itoobiya kuma ay dhacdeen inay Xamar soo gasho, waana wax cusub waxani. Waajibka ina saarani waa in la helo dad madax ah oo karti leh oo xalaal ah oo ummadda hadalkeeda adduunyada gaarsiiya, isla markaana daafaci kara marka shirarka adduunyada la isugu yimaado oo waxgarad ah. Tan labaad waa in Itoobiya laga helo dowlad garanaysa ku duulitaanka derisku inay xaaraan tahay, inay dadka Soomaalida iyo dadka reer Itoobiya waxyaabo badan oo wanaag ah ay wadaagaan, dantooduna ay isku xiran tahay, biyo ha noqoto, doog ha noqoto, energy ha noqoto, caafimaad iyo aqoon ha noqoto. Waxaa lagama maarmaan ah in la iska gaashaameysto oo la iska baheysto dhibaatooyinka adduunka ka taagan, oo dhan looga soo wada jeesto. Itoobiya waxaa laga raadinayaa in laga helo madax aaminsan oo maskaxdoodu tahay Pan-Africanism. Soomaaliduna waa in laga helaa geedo dhaadheer oo u taliya oo adduunyada fahamsan oo aqoon iyo karti leh. Labadaas haddii la isla helo wax waa la isla fahmayaa, cadaawaduna ma noqonayso mid boqolaal sano sii jirta, hadda ayaa la dhammeyn karaa. Haddii intaa la waayo, colaaddu ma dhammaanayso.
S: Muddadii ay Maxkamadaha Islaamigu xukunka Soomaaliya hayeen waxay soo bandhigeen maamul aan dowli ahayn. Markaan aqoon ahaan u eegno, maamulkoodu wuxuu u ekaa maamul ay xukunkiisa wadaan dad xaakimiin ah (Theocratic Krystocracy). Haddii taariikhda dunida dib loo qooraansado (historically speaking), maamulka noocan ah waa mid ku cusub taariikhda casriga ah. Sidaa awgeed, ma kula tahay in erey-bixinta ay qaadan kareen ay ahayd Kritarchy (maamul ay xukunka hayaan xaakimiin)?
J: Anigu taa wax baan ka qoray sannadkii la soo dhaafay 2007-dii, gaar ahaan buug ku saabsan safarka is beddelka ee waddanka Soomaalidu ku jiro oo dhaqaalaha, nabadgelyada, siyaasadda iyo xukunka dowladeed, caafimaadka iyo tacliinta aan kaga hadlayno. Anigu waxaan qoray chapter buugga ku yaalla oo ku saabsan su’aashan. Nimankii is urursaday ee Maxkamadaha Islaamiga, horta ra’yiga ay la yimaaddeen markaad guntiisa eegto mid wanaagsan buu ahaa. Wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed diintoodii inay tiigsadaan oo caqiidadoodii la soo noqdaan iyagoo markaa isku duuban oo Ilaah ka baqii isku duubay iyo diin walaaleysay inay markaa u soo jeestaan sidii ay waddankooda wax uga qaban lahaayeen. Taa wey ku hagaagsan yihiin, mana laga maarmayo. Laakiin siyaasadda dowladda dhismaheeda iyo xukunka dowladeed wuxuu u baahan yahay dad xukunka yaqaanna, shaqadeedana yaqaanna. Taasi iyagu howsheeda ma garanayaan sida iiga muuqatay. Waxyaabaha cusufka ee markiiba gaaray waxaa ka mid ahaa iyaga oo aan kala saari karin waanadii sare ee ummadda (in diinta Islaamka iyo Ilaah ka baqii iyo akhlaaqdeedii la soo celiyo) iyo dowlad casri ah oo karti leh sida loo dhisayo. Markaa waxay xitaa awoodi waayeen inay helaan dad u wada dekeddii Muqdisho markii ay fureen.
S: Sidaad ka warhaysid, waxaa Soomaaliya soo maray sagaal sano oo xukun rayid ah oo ku socday dimoqraadiyad la qabyaaladeeyey iyo (rampant corruption) musuqmaasuq baahay (1960-1969). Waxaa kaloo maray 21 sano oo xukun military oo macangag ah (1969-1991) iyo 18 sannadood oo lagu jiro xaalad jilbaha la dhigay dhulka (hobessian exodus). Xaggee baad is leedahay waa ka soo unkamay (the cause root) mashaakilka maanta taagan ee uu dalkii la degi kari la’ yahay iyo faragelinta ajnabiga ee joogtada noqotay? Mushkiladda iyo musiibada Soomaalida galaafatay, xaggee ka soo askuntay?
J: Anigu horta kulama qabo 1960-1969-kii in sagaalkaas sannadood inta la isku jumladeeyo inay yihiin tuugo, corruption, been iyo xoolaha dowladda oo la cuno. Waa in la kala qaybiyaa. Anigu buug weyn oo ah kii ugu horreeyey ayaan ka qoray. Sannadihii 1960-1967-kii anigu waxaan qabaa inuu ahaa waqtigii waddanku uu sida wanaagsan u socday. Wey jireen dad musuqmaasuq ku jira oo waa la kala qeybsanaa markii la soo galayey xukunka oo laga hoos baxayey Talyaaniga iyo Ingiriiska. Waxaa jiray dad musuqmaasuq u fahamsan dowladnimada, gaar ahaan jeeb ay iyagu iska yeeshaan oo ay cunaan. SYL laf ahaanteeda ayaa dad caynkaas ah ay ku jireen markii dambe.
Laakiin waxaa jiray dad fara badan oo Aadan Cabdulle iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen ay ugu horreeyaan oo xariir ah oo shaqadoodu iyo hamadoodu ay ahayd inay waddankooda dhisaan, in kaydka yar ee ummaddu leedahay iyo wixii sadaqo lagu siiyana si wanaagsan loo maamulo. Musuqmaasuqu wuxuu qarixiisa yimid 1967-1969-kii. Saddexdaa sannadood ayuu dillaacay. Waa tii Madaxweynihii waddanka lagu dilay. Ninkii police-ka haystay, Maxamed Abshir waa tii lagu kallifay waa inaad ciidammada amar ku siisaa inay dhulkaa tagaan oo ay dowladda ugu shubaan codka dadka. Wuu diiday, waa tii jagada laga qaaday. Laakiin in dad badan oo siyaasadda Soomaalida ku jira ay musuqmaasuqa ku dheereeyaan, taasi taariikhda ayaa dhigaysa. Haddaad i weydiisay waxani xaggee ka yimaaddeen? Wey fara badan tahay.
Horta dad sabool ah beynu nahay, oo weligeed iyo allahood gaajo iyo abaar ay wejiga ka saaran tahay. Dadka sidaa qarka ugu nool, in yar haddey arrintu ka xumaato, waa in wixii u dhow ay gacanta geliyaan illeyn badbaado ayaa kugu waajib ah. Dadka wax badan haysta oo xooluhu ku badan yihiin, musuqmaasuqa ka dhex jira wey qarsan karaan, laakiin ma qarsan karaan dadka jeebkoodu maran yahay. Marka dad sabool ah oo weligoodba roobkaa yar ee Ilaaheey keenay iyo beer yar oo wax lagu rido ku nool beynu nahay. Gumeysigu isagana wuxuu ina baray xukun haddaad yeelato inaad adigu waxaad doonto sameyn karto, qofkii kugu diidana aad afka jebiso ama si kale u kadeedo, qaasatan Talyaanigu taas wuu ina baray.
S: Soomaaliya, waxaa muuqata inay simbiriiraxatay oo ay ka dhacday haadaan dheer, welina ay suurta geli la’ dahay in laga soo bixiyo godka ay gashay. Waxaad, haddaba, mooddaa inuu nagu dhaboobay hadalkii ninkii gabyaaga ahaa (Saciid Gacamey) ee yiri “haddaan nabadda tiirkaan ku xiro loogu tegi waayin, oo toobiyahaan anigu maro maydku tira-beelin.” Sidee u maleynaysaa in nabadda Soomaaliya tiirka looga furi karo? Xaggee kula tahay in wax laga billaabo?
J: Aqalku saldhigga ayuu ka billaabmaa. Saldhigga Soomaalida dhaqankeedu muxuu yahay? Dadka badankood waxay ku oranayaan waa qabiil. Anigu taa ma oggoli. Qabiilku waa wasaq meel kale ka timid. Anigu waxaan qabaa in sheyga ugu horreeya waxa weeye in maamuuskii, sharafkii iyo edebtii diineed akhlaaqdeedii la soo celiyo. Diinteenna keliya kuma koobna ee diimaha kale, sida Masiixiga iyo Yuhuudduna wey dhigayaan. Diin waxaa loo soo dejiyey Ilaah ka baq iyo edeb adduunyadan lagu yeesho. Markaa waa in edebtaasi soo noqoto oo la helo dulqaad, daacadnimo, run-sheeg, nabadgelyo iyo deeqsinimo. Taa qof walba guriga uu joogo waa inuu ka billaabaa. Tan labaadi waxa weeye; inaynu fahanno siyaasaddu inay tahay markey macaan tahay mid ku dhisan distoor iyo dood xalaal ah, oo aad garato in qofka dooddaada ka soo horjeeda inaad dhegeysato, qaasatan xaq inuu u leeyahay in diidmada uu kuu qabo uu sheegto. Tan saddexaad waa inaynu garanno; in rasaas, toorri, waran, bud iyo dhagax la tuuro, wax allaale waxay dhisaysaa inaysan jirin. Haddii gurigaaga laguugu yimaado oo naftaada keen lagu yiraahdo waa inaad is daafacdaa, laakiin ummad inaan lagu dhisi karin violence waxaa noo macneeyey Nelson Mandela, waana inaan taa fahannaa haddaan Soomaali nahay. Midda afraad; waa inaynu yeelanno karti aan dadka madax noo noqonaya ku kala saarno oo criteria loo sameeyo. Anigu waan dejiyey intii kartideyda ahayd, waxaana ka dhigay afar:
Qofku inuu leeyahay legitimacy oo halka uu yimid markuu doonayo inuu madax noqdo taariikhdiisa/taariikhdeeda waa in la baaraa, oo markaa la ogaadaa in qofkani uu xalaal ku soo koray oo uu halkaan ku yimid.
Qofku inuu la yimaaddo karti, haddaanu karti lahayn cirbad dun ma gelin karo.
Qofku inuu leeyahay vision iyo wax aanay dad kale arkeyn.
Qofku inuu leeyahay akhlaaq (ethics) oo iyadoon cidi ku ilaalinayn aad adigu is ilaalinayso. Mid baan ku sii shaneynayaa oo ah in qofku uu isku-keene yahay iyo mideeye, waayo kan qabiilka wata waa kala qeybiye.
S: Khubarada cilmiga siyaasadda, marka ay faaqidayaan ama falanqeynayaan dowladaha camiilka ama satellite-ka u ah dowladaha kale, waxay ku lamaaniyaan dowladdii Vichy ee Faransiiska ka dhisnayd 1940-kii illaa 1944-kii. Haddaba, dowlad-ku-sheegta ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, ma la siin karaa magaca ‘Vichy Regime’?
J: Wallaahi anigu waxaan oran karaa dadka mutacallimiinta ah ee taariikhda Yurub, gaar ahaan France iyo Germany dhiga waa laga yaabaa in kelmaddaas intay soo amaaneystaan inay taa yiraahdaan. Inta waddanka la qabsado, dowladda waddanka qabsatay tu iyada u maamusha inay dhisato weeye macnaha aad u jeedaa, waana ay suura geli kartaa in kelmaddaa la geliyo waxa maanta waddankii ka taagan. Laakiin anigu waxaan qabaa inaan sidaa loo sii fogaan. Shirkii ka dhacay Nairobi, dadkii halkaa tagay Xabashi uun keliya ma aaney keenin oo haddii ay Xabashi wada keeni lahayd ayaa la oran lahaa Vichy. Dad badan oo waxaa jira aanay Xabashidu keenin oo qaarkood ay mucaaradka ku jiraan. Unkudka hore, gacan weyn Xabashidu ha kula jirto, si baas ha u baarato oo ha kala soo baxdo wixii ay doonaysay, laakiin dad badan oo nooc walba leh ayaa shirka yimid. Laakiin soo gelidda waddanka iyo fasaxa la siiyey inay ku kallifto dowlad ummaddu aanay doonayn inay qasab kaga dhigto, taasi waa mid xaaraan ah oo ummadda Soomaaliyeed aanay aqbali karin.
S: Dr Samatar, waxaa jirta in aqoonyahannada ajnabiga ah ee daraaseeya taariikhda Soomaaliya qaarkood ay rumeysan yihiin in ummadda Soomaaliyeed ay ahayd weligeedba ummad colaad u joog ah (divisive) oo u kala fadhida qabiil-qabiil (clan-oriented), oo aan marnaba yeelan maamul dhexe (central authority). Ma lagu murmi karaa, haddaba, dadkeennu uma bisla nidaam dowladeed la jaanqaadi kara oo wax la qabsan kara tan dunida casriga ah?
J: Anigu taa ma oggoli, dooddaas horeyna waan uga soo horjeestay. Ma dafirayo inaynu nahay ummad aqoonteedu aad u gaaban tahay. Ma dafirayo inaynu nahay dad caafimaadkooda iyo dhaqaalahoodu aad u liito oo daciif ah. Laakiin dad geed-adagna weynu nahayoo, ugu yaraan kun sannadood iyo in ka badan ayaanu Soomaaliya ku noolayn iyadoo dhuuniga halkaa la mariyo uu ciriiri ku jiro, oo haddana biyo la raadinayo ayaan soo nooleyn. Waxaanu nahay dad jeeni-adag oo mintid ah. Xukun haddey noqoto, haddii la eego taariikhda Soomaalida, ma aynaan ahayn dad had iyo jeer kala daadsan, oo gobanimada lama heleen haddaanu jirin xisbigii SYL oo meel kasta ka furnaa, xitaa Itoobiya gudaheeda wuxuu ka furnaa Diridhabe. Kismaayo illaa Seylac ayuu ka furnaa. Dad Soomaaliyeed bey ahaayeen wixii waxaa furay iyo xisbi qura. 1960-kii markii dadka woqooyiga ee Somaliland deggan ay xorriyadda heleen, ma aanay oran gobanimadeennii waxaan helnay June 26, marka halkaan ayaan iska fariisanaynaa, cid kale shaqo kuma lihin ee iyagoo dowladnimadii wada ayay Xamar keeneen oo ay yiraahdeen waan isku biirinaynaa, taasi waxay ku tusaysaa inay taariikhdu noocyo badan leedahay. Markaa wey na soo martay waqti wanaagsan. Haddaad jaraa’idka adduunka eegtid wixii laga qoray lixdamadii, waxaa la oran jiray Africa ma jirto dimoqraadiyad la mid ahi tan Soomaaliya. Maxaa naga celinaya in berri la yiraahdo, wey soo noqdeenoo iyagaa ah Africa dimoqraadiyadda number 1.
S: Ku xigeenka Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka ee u qeybsanaa Africa, Ambassador Herman Cohen oo ka qayb galay waa dhexdaas ahayd dood ku saabsanayd Soomaaliya ee barnaamijka Straight Talk Africa ee VOA, waxa uu ku taliyey in la aqoonsado Somaliland, isagoo ku sababeynaya inay ka taariikh duwan tahay koonfurta inteeda kale. Waxaan wada ognahay inaad adigu mar walba diiddo fekradda gooni-u-goosiga (theory of secession). Markaan microscope-ka ku eegno – si weliba theoretical ah, maxaa faa’iido ah, maxaase khasaare ah oo ku jira in Somaliland ay ka go’do Soomaaliya inteeda kale?
J: Anigu gobolka woqooyiga ee British Somaliland la oran jiray, iminkana la baxay Somaliland ayaan ka imid. Awowgey, awowgii, awowgii wuxuu ku aasan yahay meel aan magaalada Hargeysa u jirin 40ml. Mocoydeey, mocoydeed, mocoydeedii kalena waa la mid. I am proud inaan degmadaa u dhashay oo ka imid. Laakiin waxaan weligey aaminsanaa, iminkana aaminsanahay in degmadaas ay ka mid tahay dhulkaa weyn ee Soomaalida, jamhuuriyadduna ay tahay tallaabo wanaagsan oo aynu qaadnay, weyna naga dheeliday oo dib baa loo dhisi karaa. Markaa anigu kuma raacsani dadka kale ee qoray ee leh gobolkaa Somaliland wuu ka duwan yahay Soomaalida kale. Waxaan qabaa inaynu nahay dad isku mid ah. Haa, magaalada Hargeysi ma ahan Laas Caanood, Laas Caanoodna Boorame ma ahan, Booramena ma ahan Kismaayo, Kismaayana ma ahan Buulo Burde, Muqdishana ma ahan Baraawe. Wey kala duduwan yihiin, laakiin waxa isku xira ee gunta dheer ee xididka dheer ayaa waxay ku kala duwan yihiin ee dusha sare ka weyn. Markaa howshu ma ahan weynu kala duwannahay ee aanu kala soconno ee howshu waxa weeye war weynu is leennahay, dad waxaynu nahay walaalo ah oo meel ka wada yimid, oo dantoodu isku mid tahay, wey naga kala daadatay, sidee baa loo toosiyaa, yaa toosin kara, waddadeenu mari karnaa weeye su’aashu.
S: Dr Samatar, illaa markii uu guuldarreystay howlgalkii Mareykanku hoggaaminayey ee Qaramada Midoobay oo askar Mareykan ah lagu laayey Muqdisho, waxaa dadka qaar rumeysan yihiin in Mareykanku uu ka aargudanayo Soomaalida. Haddii Washington ay sii wado go’aankeeda ah in Soomaaliya lagu sii hayo qufulka lagu xiray, miyaaney kuu muuqan in arrintu sii suta-dheeraanayso?
J: Soomaaliya iyadaa quful isku xidhay. Dad badan oo adduunyada ku nool oo Mareykanka madaxdoodu ay ka mid tahay ayaa waxay ka jecel yihiin aanay jirin dad Soomaali ah oo karti leh oo adduunyada fahamsan oo adduunyada la hadli kara oo dadkoodii meel u wada. Maalin walba ayay na weydiiyaan, sidaas si la eg wadammada Yurub iyo kuwa Africa. Haddaad adigu sidaa isu caga-goyso, cadowga aad leedahay ee ku neceb markaad quful isku xirtid, mid labaad ayay kugu sii dhejinayaan. Adduunyada dadka ina jecel ee wax inala doonaya, oohintii baa ka dhammaatay, kuwa ku neceb ee doonaya inay Soomaali burburtana mar kasta sacabka ayay tumayaan oo waxay oranayaan waa kuwaa saaqidiintii Soomaalida.
S: Maamulka Mareykanku wuxuu ku jiraa wadammada loo tiriyo inay wax ka huriyaan mushkiladda ka oogan Geeska Afrika, siyaasaddoodii ku wajahnayd Soomaaliyana waxaa sutiga u qabtay dad mayal-adag oo xagjiriin ah oo ku socda cinwaanka buuggii Dr Robert Kaplan ee ahaa “Surrender or Starve” (Is dhiib ama macluul u dhimo). Sidaad arki kartid, waxa ay ku cadaadinayaan Soomaalida inay isu dhiibaan Itoobiya. Maxay tahay macaashka Mareykanku uu ku qabo in dagaalka sokeeye ee Soomaaliya uu sii socdo, iyadoo daleesha kale lagu andacoonayo inuu jiro welwel ku saabsan inaysan argagixisadu xididada ku aasan dalka? Ma waxay doonayaan inay Itoobiya u sii ceejiso Soomaalida?
J: Dowladda Mareykanka ee George Bush madaxda ka yahay inaaney dan weyn Soomaali u hayn weynu ognahay oo ay u sanqatay Itoobiya inay gasho Soomaaliya. Sannadkan iyo sannadka soo socda, 900 oo malyuun oo dollar baa Itoobiya loogu tala-galay mucaawinada Mareykanka. Qeyb libaax waxay galaysaa waxa la yiraahdo nabadgelyada Geeska Africa ee dowladda Itoobiya ay mas’uulka ka tahay. Laakiin dowladda Mareykanka iyada laf ahaanteeda waxay in badan raadisay, intuu Clinton madaxda ka ahaa iyo intuu George Bush aabbihii madaxda ahaaba, dad Soomaali ah oo karti leh oo ummaddoodii wada oo wax loo dhiibto oo wax la isku darsado ayaa la waayey.
Maanta mustaqbal cusub ayaa na soo galaya, waayo George Bush waqtigiisii wuu soo dhammaanayaa, waxaana ka haray waxaan shan bilood ka badneyn. Marka ay timaado January 2009, madax cusub iyo dowlad cusub ayaa waddankan Mareykanka ka soo baxaysa. Weli waxay u eg tahay nin madow oo aabbihii African uu yahay, hooyadiina Mareykan caddaan ah ay tahay oo la yiraahdo Senator Obama inuu madaxweyne ka noqdo. Markaa Soomaalidu xisaab cusub ma la imaanaysaa, madax cusub, hadal cusub, haybad cusub ma keeni kartaa, mise wixii saddex madaxweyne oo Mareykan ah ay uga quusteen ayaa meesha yaalla? Haddii sidan la yahay la ahaado, dowladda Itoobiya waxaa loo qorayaa jeeg cusub oo la leeyahay kuwaa waraabayaasha ah ee Soomaalida ee Geeska Africa deggan ee qasaare, dil, dhac, been iyo baa bi’iska ka shaqeynaya idinkaa mas’uul ka ah ee ilaaliya, qufulna ku xira, wixii aad u baahan tihiinna dowladda Mareykanka wey idin siinaysaa inaad xoog arrintaa wax kaga qabataan haddaad tihiin Itoobiya.
S: Dadka u ololeeya xuquuqda bini’aadamku, waxay waayadan si aan leexleexad lahayn ugu daraan Mareykanka inuu ku jiro wadammada ku tunta xuquuqul insaanka, iyagoo tusaale u soo qaata xabsiga Guantanamo Bay oo noqday meel hannaanka caddaaladda iyo garsoorku ay ka yihiin ‘la-jiifiyaana bannaan, la joojiyaanna bannaan.’ Haddaba, sow taasi kuma xusuusinayso xikmaddii Martin Luther King ee ahayd in Mareykanku uu yahay ‘the greatest purveyor of violence on the planet’ (qaybiyaha ugu weyn ee qalalaasaha caalamka)?
J: Mareykanku laba weji buu leeyahay, mid qura uun ma ahan. Waddankani waxa weeye waddan dimoqraadi ah, adduunyada casriga ahna kan ugu da’ weyn weeye 1776-kii illaa iyo maanta, weliba xagga distoorka. Waa waddan bini’aadamka soo dhoweeya. Labadaan magaalo ee aan degennahay (twin cities) ee Minnesota waxaa ugu yaraan deggan illaa 30,000 oo Soomaali ah. Waa halka ugu badan Soomaalidu dhulka ay ka deggan tahay Mareykanka. Anigu waxaan ahay nin madow oo jaamacaddan qeyb weyn oo ka mid ah xukuma oo shalay Africa ka yimid oo Soomaali ah. Waddan kale oo taa ay ka dhacday anigu ma garanayo oo England waa anigii joogi jiray.
Wejiga wanaagsan ee Mareykanku leeyahay waa distoor, naxariis, fursado badan xagga dhaqaalaha, siyaasadda, baayacmushtariga, tacliinta, teknoolejiga iyo noocaad doonaysid inaad gasho. Wejiga kale ee Mareykanku leeyahay waa inuu yahay waddan xoog leh, cunsuri ah, qaasatan nacayb dadka madow oo dhiiggooda ku jira, oo markaa sidey doonayaan ma ahane aan si kale oggolaan karin. Labadaas weji ayaa is barbar yaalla. Laakiin in badan waxaa laga soo shaqeynayey in wejigaa wanaagsan ee Mareykanku uu noqdo kan had iyo jeer la arki karo gudaha iyo dibadaba.
S: Dr Samatar, sida ay dad yar la socdaan, ururkan la yiraahdo al Qaeda waxaa sameyntiisa hal-abuuray Zalmay Khalilzad oo hadda Mareykanka u jooga New York. Waxaa kaloo jirta in Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Ronald Reagan uu ku aaminay Usama Bin Laden qoryihii halista ahaa ee la oran jiray stingers, sida ay daabacday New York Times. Markaad dhuuxdid howlgallada al Qaeda, sow lama oran karo waa aalad (tool) uu Mareykanku u isticmaalo inuu cudurdaar ugu helo gumaadka uu ku hayo caalamka Islaamka? Maxay kula tahay in Saadaam Xuseen lagu soo qabto sagaal bilood, Bin Laadin-na lagu ceyrsanayo laba iyo toban sannadood?
J: Taa waad qaldan tahay. Mareykanku muu abuurin al Qaeda. Mareykanku wuxuu gacan siiyey dad is urursaday oo Islaam baanu nahay leh oo la dagaallamayey Ruushkii qabsaday ee soo galay Afghanistan. Weliba Ruushku muu qabsan ee wuxuu gacan siinayey dowlad shuuci ah oo meesha ka dhalatay. Sidii loola dagaallamayey in laga saaro illeyn waxaa la isku hayey wixii la oran jiray dagaalkii qaboobaa (cold war) ayaa Mareykanku gacan siiyey dad yiri waxaan ka qayb galaynaa jihaad lagu saaro Ruushka. Halkaas ayay markaa ka soo bexeen dad dagaalkaa wax ku bartay lagula dagaallamayey Ruushka, kagana adkaaday, oo dabeetana dib isku urursaday oo siyaasad kale galay.
Mareykanka haddii eed la saarayo, dadkii uu ururiyey ee uu hubka siiyey, lacagtana uu siiyey inay Ruushka kula dagaallamaan inay isagii dib kula soo jeestaan wey suura geli karaysaa. Laakiin Mareykanka wuxuu abuuray al Qaeda, markaasuu ku yiri kaalayoo intaad diyaaradaha afduubtaan soo gala world trade center, taasi caqliga ma geli karayso, wax lagu sheekeysan karana aniga xaggeyga ma ahan. Maanta dadka al Qaeda isku sheegaya qasaare uun bey dadkii Muslimka ahaa u keeneen. Haddii aad Saddaam Xuseen galayso, in waddanka Ciraaq la galo oo lagu duulo anigu ma aan oggoleyn, dadkii diiddanaa baan ka mid ahaa, qawaaniinta adduunka u taalla ee international law-na ma dhigayso arrintaas. Laakiin waa inaan annaguna ogaannaa, Saddaam Xuseen wuxuu ahaa dhiigyacab, waddankiisii iyo dadkiisii si baas u burburiyey. Iiraan oo aan cadaawad kala dhexeyn ayuu iska galay, Mareykankuna uu yiri haddii aad galayso adiga ayay ku jirtaa ee soco oo taageero buu siiyey.
Malyuun qof ayaa ku dhintay dagaalkaas, wuxuuna socday toban sannadood. Waxay ahayd gardarro ka timid Saddaam Xuseen. Dadkiisii gaas buu ku furay. Laba wiil oo uu dhalay oo waraabe ah ayuu doonayey inuu waddanka u dhiibo markuu dhinto. Markaa Saddaam Xuseen inay dadka ku nool Ciraaq iska qabtaan mar hore ayay u ahayd. Haddii gacan lagu siiyey inay iska qabtaanna anigu waxba kama qabo, laakiin in waddanka Ciraaq lagu duulo oo ciidamo Mareykan ah la geeyo oo ummadda lagu baa bi’iyo, oo dhaqaalahoodii iyo adduunyadoodii lagu baa bi’iyo, lagana dhigo in ka badan saddex malyuun inay haajiraan, lana gaarsiiyo jugta caynkaas ah waxaa dambigeeda iska leh Mareykanka, xisaabta adduunyadana wey sugeysaa.
S: Dr Samatar, waxaa muddo dheer adiga iyo walaalkaa Professor Abdi Samatar aad ku howlanaydeen buug ku saabsan dhaxalkii ay reebeen Aaden Cadde iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen (Somalis as Africa’s First Democrats). Mufakir Giriig ah ayuu ahaa ninkii yiri, “Behind each written history, there is an unwritten history” oo macnaheedu noqonayo, “Taariikh kasta oo qoran gadaasheeda waxaa taalla mid aan qornayn.” Sidaa darteed, waxaa jirta inaan la iska indha tiri karin in nimankii u horreeyey Africa ee xukunka kaga dega qaab dimoqraadi ah inay ahaayeen Cabdullaahi Ciise iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Maxay kula tahay?
J: Taa waxba kama jiraan. Waayo 1960-kii wixii ka horreeyey dowladi ma aanay jirin Soomaaliya. 1960-kii July 1st ayaa Jamhuuriyadda Soomaalida la aasaasay. Halkaas ayay taariikhda dowladnimo iyo doorasho ay ka billaabatay, oo Baarlamaan ay dadka Soomaalidu soo doortaan ay ka yimaaddeen. Aaden Cabdulle Cusmaan wuxuu ahaa Madaxweynihii Soomaalida uun ma ahane, Afrikada gumeysigu ka tagay ee gobanimada qaadatay, Madaxweynihii ugu horreeyey ee inta doorasho lagaga adkaado xafiiska si nabadgelyo ah uga dhaqaaqa ayuu ahaa. Cabdirisaaqna waa looga horreeyey Ra’iisal Wasaaraha oo Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa kaga horreeyey. Buugga haddii aad su’aal iga weydiisay, buuggani waa buug adag, howl badan buu u baahan yahay, research badan buu u baahan yahay, weli waan ku jirnaa, laakiin laba sano oo dambe wey qaadanaysaa sida loo dhammeynayo.
S: Waxaad dhowr mar daraasado cilmi-baariseed ka soo sameysay wadamada Africa ee soo koraya ee sameeyey horumar dhaqaale oo xowli ku socda. Waxaa wadammadaas ka mid ah wadammo horukaca dhaqaalahoodu ku xiran yahay dalxiiska iyo xoolaha. Sidaa awgeed, waa maxay casharka ay ka baran karto Soomaaliya marka ay u qalab-qaadato horumar dhanka dhaqaalaha ah?
J: Horta dhaqaalaha waxaa miftaax u ah siyaasadda. Siyaasaddu haddii ay kaa murugto, oo ay markaa dagaal, xagasho, burbur, guryihii dowladda iyo wixii oo dhan la baa bi’inayo, dhaqaalihii ma dhaqaaqayo, lacagtiina wey baxsanaysaa. Adduunyada oo dhan bal eeg, meeshii ay nabadgelyo jirto oo dowladdu ay shaqeynayso ayay lacagtuna tagtaa oo ay joogtaa in badan. Lacagta tagta dhulka dagaalladu ay ka dhacayaan ee burburka ahi waa lacag doonaysa inay degdeg wax u qabsato oo ay ka baxsato meesha oo xoogaa ay ka gurato, amba lacag si madow ku soo galaysa oo lacag xaaraan ah, ama drugs ha noqoto ama si kale ha ku timaado. Siyaasadda deggan ayaa miftaax u ah in dhaqaale la abuuro.
Waayo dhaqaaluhu muddo dheer buu qaataa. Haddii aad warshad dhisayso muddo dheer bey qaadanaysaa inaad muhandasadii aad sameyso, dadkii aad keento, suuqii sameysato. Wadammada deggan ee xasiloon Africa gudaheeda haddaad eegto waa waddanka Botswana. Waddankaas xasiloonida iyo dimoqraadiyadda ka taagan qof tagay uun baa garan kara. Markaa derisku waxa weeye war Soomaaliyeey waa inaad siyaasaddii dejisaa.
S: Dr Samatar, gabagabadii maxaad jeclaan lahayd inaad la qaybsatid dadka arki doona wareysigaaga?
J: Anigu dadka Soomaalida waxaan leeyahay waad salaaman tihiin meel aad joogtaanba. Waxaan leeyahay saddex amuurood aanu isla ogaanno qof walbow meel alla iyo meeshaad joogtid. 1. Rajo. 2. Geesinimo iyo 3. Adkeysi. Saddexdaas haddaan isla ogaanno wax uun baa meel inoo mari, kuna adkeysta inaad raadsataan madax idiin qalanta oo waqtiga kadartaa adag u qalanta oo waddanka godka ka saarta, aadna is baartaan sidii aad ku heli lahaydeen. Doodda iyo hadalka wadistiisu ha inoo noqoto ballan xoog leh. Dagaal iyo dil waa in meel la iska dhigaa oo laga ilbaxaa.
This entry was posted in QARANIMO. on 08/13/2008 by Abdirasak.
← DEEQ LA GAARSIIYEY DADKA SOO BARAKACEY. QILAAFKA KOOXDA IMBEGHATI OO SII KORDHAY. →